Tsia Amin’ny Fitaovam-Piadiana Shimika Syriana Hopotehina Any Albania · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Desambra 2013 21:44 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, فارسی, srpski, Español, 繁體中文, 简体中文, عربي, English
Nahatezitra ny Albaniana, izay nidina an-dalambe ho fanoherana ny volavolan-kevitra, ny tatitra fa mety hopotehina any Albania ny tahiram-pitaovam-piadiana Shimika Syriana. Taorian'ny fihetsiketseha-panoherana, Nandà ny handray ireo 1300 taonina sarin, motarda ary kasinga hafa avy any Syria ny fitondrana Albaniana.
Nanao izay handrenesana ny feony tan-tserasera ny mpiserasera Albaniana.
mpiaro ny tontolo iainana tafavory tamin'ny 12 Novambra tao an-drenivohitra Albaniana ao Tirana manohitra ny fikasan'ny fireneny hanaiky handray ireo fitaovam-piadiana shimika avy any Syria. Loharano: PBS Newshour. Nampiasaina noho ny alalana CC BY 2.0
Tao amin'ny Taratasy misokatra ho an'ny Filoha Obama, ny Albania Reloaded no nanoratra hoe:
Olom-pirenen'i Albania miahiahy mafy aho, tahaka ny Albaniana an-tapitrisany izay tohina tamin'ny fandrenesam-baovao fa hiditra amin'ny morontsiraka albaniana ny karazam-piadiana shimika mahafaty an'ny fitondrana Assad. Ho an'ny firenena kely manana velarantany 28000km², be mponina loatra, kely fotodrafitrasa, tsy voatanisa intsony ny olana eo amin'ny sokajin'asa rehetra eo amin'ny toekarena, fahasalamana, fanabeazana, tontolo iainana, fambolena, fizahantany, ny ady amin'ny kolikoly sy ny andian-jiolahy mirakitra amin'ny selan'ny fiarahamoninay rehetra, ny fanapahan-kevitra hamtehana ny fitaovam-piadiana shimika eto Albania dia POIZINA MAHAFATY. Tsy azo anontaniana ny fiantraikany mety mahafaty ateraky ny fanapahan-kevitra eo amin'ny ain'ny Albaniana sy amin'ny taranaka ho avy.
Robert Kyriakides nanazava ny raharaha tao amin'ny bilaoginy Not In My Backyard – Famotehana ny Fitaovam-piadiana Shimikan'i Syria any Albania:
Loharano: Naman'i Syria ao amin'ny WordPress. Nampiasaina noho ny Used under CC By 2.0
Tsy nahare loatra momba an'i Syria isika tao ho ao. Toa hoe ny fifanekena hanaisotra sy hamotika ny fitaovam-piadiana shimikan'i Syria dia nanaisotra ny fandrahonan'ny fidirana an-tsehatry ny demaokrasia tandrefana izay tsy hidaroka baomba an'i Syria ary hanampy ny famotehana ataony ho an'ny tenany amin'ny fifamotehana sy fifamonoana ifanaovan'ny Syriana, ary misy fanampiana kely avy amin'ny namany avy.